I-India Civil Aviation yenza iParadigm Shift kuLawulo lwe-e
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-India Civil Aviation yenza iParadigm Shift kuLawulo lwe-e
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel
I-India Civil Aviation uphehlelelo lwe-e-platform
UMphathiswa wezoPhapho lwaseIndiya uShri Jyotiraditya Scindia usungule namhlanje i-eGCA – iqonga loLawulo lwe-elektronikhi kwiCandelo loMlawuli Jikelele wezoPhapho loLuntu (i-DGCA).
Iprojekthi ijolise ekuzenzeni iinkqubo kunye nemisebenzi ye-DGCA.
Umphathiswa weManyano yezoPhapho uthi le projekthi ibonisa utshintsho lweparadigm ukusuka kulawulo olusisithintelo ukuya kwintsebenziswano eyakhayo.
Iinkonzo ezibonelelwa ngabathathi-nxaxheba abohlukeneyo be-DGCA abafana nabaqhubi beenqwelo-moya, ukulungiswa kweenqwelo-moya, njl.njl. ziya kufumaneka kwi-intanethi kwi-eGCA.
Ngomhla i-India ibhiyozela ngayo i-"Azadi Ka Amrit Mahotsav" yokukhumbula iminyaka engama-75 yeNkululeko, uShri Jyotiraditya M. Scindia, uMphathi weManyano yezoPhapho, namhlanje ezinikezele i-eGCA, iqonga lolawulo lwe-e. ICandelo loMlawuli wezoKhenketho loLuntu (DGCA) esizweni. Ngesi sihlandlo, uNobhala we-Civil Aviation uShri Rajiv Bansal, uMlawuli Jikelele we-Civil Aviation uShri Arun Kumar, kunye namalungu abalaseleyo kwishishini le-aviation yoluntu.
Ethetha ngalo msitho, u-Shri Scindia uthe ukwamkela umbono weNkulumbuso eHloniphekileyo ye-Digital India, i-DGCA iphumeze i-e-governance platform ye-eGCA. Le projekthi ijolise ekuzenzeni iinkqubo nemisebenzi ye-DGCA, eneenkonzo ezingama-99 ezibandakanya malunga nama-70% omsebenzi we-DGCA ophunyeziweyo kwizigaba zokuqala, kunye neenkonzo ezili-198 eziya kubandakanywa kwezinye izigaba. Uthe eli qonga lefestile liNye liza kuzisa utshintsho olukhulu- ukuphelisa ukungasebenzi kakuhle, ukunciphisa unxibelelwano lomntu, ukuphucula ingxelo yolawulo, ukukhulisa ukungafihli kunye nokwandisa imveliso.
Uyincome kakhulu i-DGCA ngokungenisa inguquko ukusuka kulawulo olusisithintelo ukuya kwintsebenziswano eyakhayo. UMphathiswa uthe sisandula ukuqalisa, uhambo alukapheli, kwaye kungekudala kuza kubakho uphononongo ukuze kuqondwe ukuba abathengi baxhamle njani kolu tshintsho, kwaye yintoni enye ekufuneka yenziwe. UShri Scindia uthe owethu ngurhulumente ophendulayo, owathi, phantsi kobunkokeli bukaShri Narendra Modi, waguqula ubunzima bexesha lobhubhane libe lithuba.
Le projekthi iza kubonelela ngesiseko esomeleleyo seziseko ze-IT kunye nesikhokelo sonikezelo lweenkonzo. I-e-platform ibonelela ngesisombululo sokugqibela esiquka izicelo ezahlukeneyo zesoftware, unxibelelwano kunye nazo zonke iiofisi zengingqi, “i-portal” yokusasazwa kolwazi kunye nokubonelela nge-intanethi kunye nokuhanjiswa kweenkonzo ngokukhawuleza kwindawo ekhuselekileyo. Iprojekthi iza kuphucula ukusebenza kakuhle kweenkonzo ezahlukeneyo ezibonelelwa yi-DGCA kwaye iza kuqinisekisa ukungafihli kunye nokuphendula kuyo yonke imisebenzi ye-DGCA. Iprojekthi iphunyeziwe ne-TCS njengoMboneleli weNkonzo kunye ne-PWC njengoMcebisi woLawulo lweProjekthi.
Ngethuba lokusungulwa, uMphathiswa weManyano yezoPhapho lwasekuhlaleni naye watyhila isifundo se-case, "i-DGCA ithatha uhambo lwe-digital flight," oluthatha uhambo lwe-DGCA ngokuphunyezwa kwe-eGCA. Imingeni i-DGCA ejongene nayo kunye namanyathelo athatyathiweyo ukulungisa oku kusetyenziswa iqonga le-eGCA ibandakanyiwe kolu phando.
Iinkonzo ezinikezelwa kubathathi-nxaxheba abohlukeneyo be-DGCA abafana nabaPhathi beeNqwelo-moya, iiNjineli zokuLondoloza iiNqwelo-moya, abaLawuli beZithuthi zoMoya, abaSebenzi boMoya, abaSebenzi beSikhululo seenqwelo-moya, iMibutho yoQeqesho lokuPhaphaza, imibutho yoLondolozo kunye noYilo njl.njl. ngoku ziyafumaneka kwi-eGCA kwi-intanethi. Abafaki-zicelo ngoku baya kuba nakho ukufaka izicelo zeenkonzo ezahlukeneyo kwaye bafake amaxwebhu abo kwi-Intanethi. Izicelo ziya kuqwalaselwa ngaMagosa e-DGCA, kwaye iimvume kunye neelayisensi ziya kukhutshwa kwi-intanethi. I-app ephathwayo iye yaphehlelelwa abaqhubi beePilothi kunye neeNjineli zokuLondolozwa kweenqwelomoya ukujonga iiprofayili zabo kwaye bahlaziye idatha yabo ekuhambeni.
Inyathelo le-EGCA linyathelo elibalulekileyo kuhambo lwenguqu yedijithali ye-DGCA kwaye liya kutyebisa amava abo bachaphazelekayo. Kwi-DGCA, linyathelo eliya kwicala elithi "lula ukwenza ishishini.” Olu tshintsho lwedijithali luza kuzisa ukongezwa kwexabiso elibalulekileyo kwisakhelo solawulo lokhuseleko lwe-DGCA.